13 Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo ka dhacay Basra | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA 13 Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo ka dhacay Basra
13 Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo ka dhacay Basra
Barsa(SONNA) Wararka ka imaanaya Degaanka Basra ee Gobolka Shabellaha Dhexe una dhexeeya Degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan labada Shabeele ayaa sheegaya in Diyaarad dagaal oo nuuca aan duuliyaha lahayn ay duqeysay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan Alshabaab.
Taliyaha 12-April ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed Janaraal Cumar Xasan Aadan(Cumar dheere) oo u warramayay Wakaaladda SONNA ayaa xaqiijiyaya in duqeyntaasi lagu bartil maameedsaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad katirsan Alshabaab xili ay ku shirsanaayeen halkaasi.
Wariyaheena Maxmed Amiin Yabarow oo Jooga Balcad oo wareystay dadka deegaanka,mas’uuliyiin iyo saraakiil ayaa sheegay in ilaa 13 qof oo katirsan maleeshiyaadkaasi ay ku dhinteen duqeyntaasi.
Deegaanka Barsa ayaa waxaa dhowr jeer ku dagaalamaya Ciidamad Dowladda iyo kuwa Alshabaab,waxaana saraakiishu ay sheegayaan in ay wadaan qorshe Shabaab looga saarayo guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka.
Previous articleFAALLO:Dowladda iyo Shacabka waxaa ku dhex jira Danleey
Next articleCiidamamda Soomaaliya oo burburiyey xaruntii Qaraxyada Al-shabaab